China Capsule Bottle PET Brown fekitori uye vagadziri | Qianduo kavha
PET mabhodhoro epurasitiki anotora yakakosha nzvimbo yemusika mune angangoita ese maratidziro emakesi emidziyo. Izvi zvakasununguka hazvipatsanurike kubva kune zvakanakira PET mabhodhoro epurasitiki. Chekutanga pane, pet peturu bhodhoro zvinhu kugadzikana zvakanaka, tembiricha kuramba, mune imwe tembiricha kuchengetedza zvinhu kugadzikana, kunyanya yakakodzera chikafu kurongedza. Kechipiri, mabhodhoro epurasitiki epurasitiki ari pachena uye ane akafanana neakafanana nemabhodhoro egirazi, asi iwo akareruka uye anotetepa. Yetatu, mabhodhoro epurasitiki epurasitiki akadhura, zvinoenderana nekuchengetedza mutengo wekutakura. Chekupedzisira, mabhodhoro epurasitiki epurasitiki ane akasiyana maumbirwo, ayo anogona kuumbika akasiyana maumbirwo.
Zvakanakira PET Bhodhoro
bhurawuni Mabhodhoro ePET akareruka uye akasimba, uye simba ravo uye kusimba kuri pamusoro zvakanyanya kupfuura izvo zvakagadzirwa nezvimwe zvigadzirwa zvepurasitiki. Polyester bhodhoro rakareruka uye rakasimba, uye simba rayo uye kusimba kuri kwakakwirira zvakanyanya kupfuura izvo zvakagadzirwa nezvimwe zvigadzirwa zvepurasitiki. Inogona kumira zvine mutsindo pasina kukuvara. Iyo yakakodzera kugadzira mabhodhoro ekuputira zvinodhaka ane mutete mutete, huremu hwakareruka uye yakasimba simba. Muchiitiko cheiyo yakafanana vhoriyamu yemushonga, huremu hwePET bhodhoro inongova 1/10 yeiyo yegirazi bhodhoro; huremu hwePET bhodhoro neiyo imwechete yekunze dhayamita i1.5 yakapetwa iya yegirazi bhodhoro. Transparent kana opaque brown mabhodhoro anogona kugadzirwa kubva kuPET mbishi zvinhu.
Zvimiro zveGood PET Bhodhoro
Kazhinji muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, iwo akajairika maumbirwo epurasitiki magaba akaenzana, rectangle, denderedzwa, ellipse, nezvimwe kubva pakuona kwekushandisa kwedu, iwo mabhenefiti akasiyana. Mutumbi webhodhoro unofanirwa kuve wakaumbwa zvakanaka, uine pachena, pasina mabhuru, mavara matema, mafuta emafuta, zvinhu zvakaomarara, abrasions, mhete dzakaomarara, atomization uye machena. Ruvara rwebhodhoro rine ruvara runofanira kuva yunifomu uye isina pachena musiyano weruvara. Chiso chekupedzisira chemuromo webhodhoro chinofanira kunge chakapetana, pasina kukuvara uye notch, iine tambo dzakazara, crystallization yakakwana, isina kuturika, kudhirowa, deformation nemafuta emafuta mukati nekunze. Pasi pebhodhoro rinofanira kunge rakaumbwa zvakanaka, pasina kushushikana, bulge uye pakati Kuonekwa kweye yakazadzwa chipfuyo chemabhodhoro epurasitiki haina kubva pakudonha uye kushanduka, bhodhoro rakapetana, divi remadziro deformation, convex pasi uye kushushikana. Chigadzirwa chine yakachena pamusoro, hapana hwema hwekunhuhwirira, kuoma, pasina guruva uye mafuta tsvina, uye hapana kusvibiswa mukati.
Pashure: Capsule PET Bhuruu
Zvadaro: Capsule Bhodhoro PET Green